Aqoonkaab Maxaad ka taqaan Android Taariikhdiisa iyo Noocyadiisa | Aqoonkaab
Maxaad ka taqaan Android Taariikhdiisa iyo Noocyadiisa
Jun 21, 2016Technology
andriod waa magac barnaamijka ay ku shaqeeyaan telefoonada gacantee casriga ah kaas oo ay hada leedahay shirkadda amerikanka ah ee Google. Andriod waxay gaadhay sanadahan ugu danbeeyey meel aad u cajiiba. Marka la soo hadal qaado android waxay markaaba maskaxdaadu soo qabanaysaa wax soo saarka Shirkada Googleka inuu adriodku ka mid yahay.
HAA android waa wax soo saarka google balse waxaad ogaalkaaga ku dartaa inay noqtay sanadkii 2005. Andriod waxaa aasaasay afarta wiil ee magacyadoodu kala yihiin Andy Rubiin, Rich minner, Chris white iyo nick sears sanadkii 2003. Waxayn dhiseen barnaamiijkii ugu horeeyey ee android ah iyaga oo waliba markaas u sameeyey cameradaha digitalka ah ka dibna u wareejiyey in lagu isticmaalo mobileka. Sanadkii 2005 ayaa waxaa iibsaday shirkada google. Laba sano ka dib bishii November 5 2005 waxay shirkada google shaaca ka qaaday inay sameeyeen Android Os.
Noocyadii uu soo maray andriodku
Android 2.3 Ginegrbread
Android 4.0 and Later Icecream Sandwitch
Android 6 Marshallow
Android N weli tijaabo ayuu ku jiraa lama soo bandhigin
Previous PostAfter effect CC 2015 Next PostInfectious Disease Essential